Izimvo zesipho ebusuku - Iiproms
Zininzi izimvo ezintle ngezipho eziqinisekileyo ezinokukunceda wenze ubusuku bakho bokukhuthaza ukuba bukhetheke.
Iingcebiso ngeZipho eziPhuculo
Ukufumana izipho ze-prom ezivela kumhla wakho okanye nabazali bakho isithethe esimnandi. Ezinye izipho ngokwesiko kutshintshiswana ngazo ngemihla yokunyusa, ngelixa ezinye izipho zinokuvela ngokulula kumzali ofuna ukunceda ukukhumbula umsitho. Izipho akufuneki zibize kuba 'yingcinga ebalulekileyo.' Isipho esincinci esineenjongo ezilungileyo sinokuba sihle ngakumbi kunento ebizayo. Nazi ezinye izimvo zesipho ekufuneka uziqwalasele:
Iingubo zeBlue Prom
Iingubo zeGreen Prom
I-Corsage kunye neentyatyambo
Kuqhelekile ukunika umhla wakho i-corsage okanye i-boutonniere ye-prom. Uninzi lwamantombazana lukhetha ukunxiba i-corsage yesihlahla ngentyatyambo, ngelixa abafana benxiba intyatyambo enye (eyaziwa ngokuba yi-boutonniere) ebotshelelwe kwisuti yabo. Abafana banokumangalisa umhla wabo ngokuzisa isipha seentyatyambo okanye iiroses. Amantombazana amaninzi ayakuthanda ukufumana iintyatyambo kwaye kufuneka azibeke evaskeni enamanzi ukonwabela iintsuku emva komdaniso. Kungcono ukuthatha i-corsage kwiiyure ezimbalwa ngaphambi komdaniso. Emva kokuyithenga, yibeke efrijini ukuze ihlale intsha.
Ubucwebe bunokwenza ubusuku bokukhuthaza isiganeko esikhethekileyo. Abanye abazali banokukhetha ukunika intombi yabo isacholo okanye amacici. Oku kunokuba nzima, nangona kunjalo, kuba amantombazana amaninzi aya kuba nayo yonke into ecwangcisiweyo yobusuku. Ukuba unika isacholo somqala okanye esinye isiqwenga sobucwebe njengesipho se-prom, buza ngaphambili ukuba angathanda ntoni kwaye umnike ithuba lokuba akhethe. Unokunika into entle njengophawu lothando lwakho, kwaye umkhuthaze ukuba ayinxibe ngelinye ixesha. Abafana abafuna ukunika usuku lwabo isiqwenga sobucwebe baya kufuna ukwenza oku kwintombi, kunokuba ibe ngumhla oqhelekileyo. Oku kunokuba yindlela yokucela intombazana ukuba ibe yintombi yakho. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba uya kuthi ewe okanye kunokubakho ubusuku obungathandekiyo ngaphambili.
Olunye uluvo ngezipho zokunyusa sisipho samava, njengokumangalisa umhla wakho ngokukhwela i-limo. Ukwenza oku, sukumxelela kwangethuba, kwaye wenze ngathi uzakumkhwelisa kwimoto yakho ebethiweyo okanye uza kuhamba nomntakwenu osele ekhulile. Esi sipho sinyanzelekileyo ngokuqinisekileyo siya kuthakazelelwa. Unokucinga ngokufumana iqela labahlobo ndawonye ukuze ungene kwiindleko zelimo.
Abazali banokufumanisa ukuba ubusuku bokukhuthaza lixesha elifanelekileyo lokunika unyana okanye intombi yabo ikhamera entsha ukuba iye kumdaniso. Olu luvo oluhle, ngakumbi ukuba ungachitha imizuzu embalwa uqaphela useto lokukhanya okumnyama kwaye umbonise ngaphambi kwexesha. Ikhamera encinci encinci lolona khetho lufanelekileyo lokungena epokothweni okanye kwisipaji, kwaye ityala lokuthwala liluncedo. Ungaphuma uphele ngokuthenga ikhamera ngombala ofana nemibala ye-prom, ilokhwe yentombi yakho, okanye umbala owuthandayo. Qinisekisa ukuba ikhamera inebhetri epheleleyo ngaphambi kokuba uyinike yonke into isethelwe ubusuku bokukhuthaza.
Ukwenza Prom ngakumbi ngakumbi
Izipho zokunyusa yindlela entle yokwenza ubusuku obukhethekileyo ukuba bukhumbuleke ngakumbi. Nokuba ukhetha into elula njenge-corsage okanye egqithisileyo njengekhamera entsha yedijithali, ububele bakho ngokuqinisekileyo buya kuthakazelelwa.
Ukuba nguwe ofumana isipho, qiniseka ukuba uvakalisa umbulelo ngamagama okanye ngenqaku lombulelo.
Ubudlelwane Imibuzo Iindidi E Yoga Ukuziphatha Komntwana, Uphuculo & Ubuzali New Cars Uyilo Lwetattoo
ezona ncwadi zixabisekileyo onokuzikhangela
Ulufumana njani uphawu lwam lwejuno
I-pisces indoda kunye ne-libra yabasetyhini bomphefumlo
zihlala ixesha elingakanani iintaka njengezilwanyana zasekhaya
ungawasusa njani amanzi anzima kwiglasi